Macluumaadka ku saabsan PixelHELPER Foundation
ka tahay IST light tahayhalkee sie no sare sharciyada ogyahay ka badan ihre leedahay, sharciyada run iyo qurux.
Gargaare pixel wuxuu eegaa adduunka oo dhan Shabakad firfircoon & farshaxan waayo, xuquuqda aadanaha ka hor Dulmiga & xorriyadda hadalka sidey ula dagaalamaan. la tahay waxaan rabnaa inaan muhiimno arrimaha bulshada in la tilmaamo. Waxaan sidoo kale ku shaqeynaa Emashaariicda gargaarka horumarka Afrika. Leh Goobaha rootida ee qasacadeysan soo saar si loo kordhiyo xasiloonida cuntada ee Xerada Qaxootiga, Gobollada isku dhaca & Musiibooyinka dabiiciga ah rooti raagaya ee gasacadaha ku jira. Waxaan kordhineynaa Xasiloonida cuntada Afrika. Aagga Gargaarka deg degga ah isku dayaa Gargaare pixel oo ku xigta warshadaha rootida qasacadaysan ee Afrika kuwaas oo u dhow UNHCR Waxaa jira xeryo qaxooti, ​​kuwa yaryar cisbitaalada weelka wareega in lafuro. Fadlan naga caawi hoosta shayga menu-ka deeqdo oo ay taageeraan shaqada unserer Ururka. Fiidiyowga soo socda wuxuu ku siinayaa aragti kooban oo ku saabsan shaqadeena muhiimka ah.
Farriimaha midabada leh ayaa saameyn ku leh nolosheena. Filim sawir ah oo ku saabsan PixelHELPER
Sideed ula macaamilaysaa kuwa dambiyada ka dhanka ah aadanaha
faa'iido, nolosha cadaabta? Sideed u rartaa a
Xusuusta xasuuqa ee ka socota degmada dowladda illaa Marooko? Iyo: sidee u dumineysaa derbiyada Yurub?
Taas ka sokow waan shaqeynaa Kaalmada horumarinta iyo mashaariicda farshaxanka waxqabadka ee dibadda.
Waxyar kadib markii muuqaalka laga sii daayay, waxaa yimid militariga Marooko
BBC Carabi iyo malaayiin muslimiin ah ayaa arkay burburka Xuskii xasuuqa Uyghurs
Tani waxay muujineysaa shaqadayada dimoqraadiyadda, dulqaadka iyo sinnaanta in si deg deg ah loogu baahan yahay marka dowladaha kali taliska ah Argagixiso Ku tumasho xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda farshaxanka.
Goobaha rootida ee qasacadeysan soo saar si loo kordhiyo Deganaanshaha cuntada waayo, qof guri la'aan, Xerada Qaxootiga, Gobollada isku dhaca & masiibooyinka dabiiciga ah rooti raagaya ee gasacadaha ku jira. Waxaan kordhineynaa Deganaanshaha cunnada ee Afrika & at Menschen kuwa saaran Wadada tooska ah.
KA BAX OO NAFTAADA QAAD
Fadlan naga caawi hoosta Ku tabaruc shay menu ah iyo taageerida shaqada ururkeena.
Tagesschau wuxuu ka warbixinayaa gabyaheena ka dhanka ah Boqorka Thailand.
Ku saabsan PixelHELPER Febraayo 4th, 2021Oliver Bienkowski